Caabud-waaq: Soomaali ka soo carartay colaadda ay ku haysay Oromada Itoobiya oo gargaar dalbaday |
Caabud-waaq: Soomaali ka soo carartay colaadda ay ku haysay Oromada Itoobiya oo gargaar dalbaday
Jicmo, October, 05, 2018 (GNN) – Ku dhawaad 50 qoys oo kasoo barakacay colaadda Soomaali Galbeed ee Oromada iyo Soomaalida ayaa gaaray degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud.
Qoysaskan oo isugu jira carruur iyo dad da’ah ayaa ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed iyo hay’adaha caalamiga inay gurmad usoo sameeyaan,iyagoo sheegay in hantidoodii la dhacay.
“Xoolo iyo beero ayaan lahayn intiiba waxaa naga qaatey Oromada ,guryihiina naga gubey… maanta wax aan heysano maleh bacaan ku hoos jirnaa.” Saynab Cali oo 75 jir ah ayaa sida u sheegtay warbaahinta.
Canab Cabdi Cali, guddoomiyaha xerada ay dagan yihiin dadka soo barakacay ayaa sheegtay qoysaska ku nool xerada inay heysato dhibaatooyin kala duwan oo hoyga iyo cunada ugu horreeyso, iyadoo inta ku darta xata biyo nadiif ah inaysan helin.
“Dadkan waxay ahaayeen dad aan waxba wadan, qaarkood ayaa xata carruurtii ay dhaleen ka soo tagay oo awoodi waayay inay halkan soo gaarsiiyaan.” Canab Cabdi ayaa sida sheegtay, waxaa ay ku baaqday si deg deg ah in qoysaskan loogu soo gurmado.
Isku dhacyada qowmiyadaha Itoobiya, gaar ahaana Soomaalida iyo Oromada ayaa sababay boqollaal qoys inay usoo barakacaan gudaha Soomaaliya,waxaana ka mid ah goobaha ay dadku ku soo barakaceen deegaanno ka tirsan gobolka Sanaag iyo gobollada kale ee waqooyiga.